रोग – Health Post Nepal
धेरैजसो महिलाहरु परिवार योजना गर्नुअघि वा गर्भवति हुनुअघि चिकित्सकसँग सल्लाह लिँदैनन्। शरीरमा के–कस्ता समस्या, रोग वा इन्फेक्सन भइरहेका छन्, थाहा पाउन पनि स्त्रीरोग विशेषज्ञलाई देखाउन जरुरी छ। नियमित जाँच गर्नाले महिलाहरुमा बाँझोपन छ वा छैन भन्ने कुरा जानकारी हुन्छ...
विश्वका २ करोड ३० लाख बालबालिका नियमित खोपबाट वञ्चित
मुखबाट अमिलो पानी वा डकार आउने समस्या हामी धेरैमा हुन सक्छ। हाम्रो सन्दर्भमा यो समस्या आम बनिसकेको छ। प्रायः खाना खाएपछि मानिसलाई डकार आउने गर्छ। पेटमा भएको हावा बाहिर निस्कनेक्रममा पेटबाट अमिलो डकार निस्कने गर्छ । यस्तो समस्या देखिनासाथ...
काठमाडाैं सिनामङ्गल बस्ने निर्मल ढकाल र उनकी श्रीमती अङ्किता कोइरालाका साढे १० महिने छोरालाई सुरुमा ज्वरो आयो र जिउमा साना साना डाबरहरू देखियो। कहिले १०३ सम्म ज्वरो आउने र कहिले ज्वरो घट्ने भएपछि उनीहरूले आफूले पहिला देखाउँदै आएका बाल...
तपाईलाई पसिना धेरै आउँछ ? यस्ता रोग हुनसक्छ
पसिनासित को परिचित छैन र ? सामान्यतया स्वस्थ जिउको लक्षण मानिने पसिनाले शरीरको तापक्रमलाई स्थिर राख्न मद्दत गर्छ । तर, अति पसिना आउनु रोग हो । ‘हाइपरहाइड्रोसिस’ (अति पसिना) नामक एउटा रोग छ, जसबारे यहाँ चर्चा गरिन्छ । समाजमा...
कानको मैल अर्थात कानेगुजी सुन्ने र देख्नेवित्तिकै धेरैलाई घिन लाग्छ। तर, तपाईलाई यो थाहा नहुन सक्छ कि, कानका लागि यो कति महत्वपूर्ण छ भन्ने। कानेगुजी कानका लागि राम्रो भएपनि कहिलेकाँही भने यसले समस्या पैदा गर्न सक्छ। बेलायतकी इएनटी सर्जन...
सरिता (नाम परिवर्तन) लाई रात भर निन्द्रा परेन। न मर्नु, न कसैलाई आफ्नो गोप्य कुरा पोख्नु। रातभर छटपटी मै बित्यो। अर्को दिन पनि उनी सुखसँग बस्न सकिनन्। फेसबुकमा टुङटुङ मेसेज आइरहेकै छ। फेसबुक म्यासेन्जर खोलेर हेर्ने आँटै आएन। खोलेर...
विश्वभरमा १७ करोडभन्दा बढी संक्रमित, करीब ३६ लाखको मृत्यु। नेपालमा मात्रै करिब ६ लाख संक्रमित, साढे सात हजारको मृत्यु। केही दिन अगाडी उपलब्ध सरकारी तथ्यांकले त्यसै भन्छ। यो डेढ वर्ष अवधिमा भनौं कि कोरोनाकालमा हामीले थुप्रै नै क्षति भोगिसक्यौं।...
मुखमा हुने दन्तेलेउ, गिजाहर्ष, दन्तागजाहर्सा, श्वास गन्हाउने जस्ता रोगबाट बच्नु नै मुखको सरसफाईको प्रमुख उद्देश्य हो । घरमै गरिने मुखको सरसरफाईका उपायमध्ये ब्रस गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । ब्रसको शीर मुखको विभिन्न भागमा पठाउन सकिने र तीन चारवटा दाँतलाई...
भारतको महाराष्ट्रमा अक्सिजन ट्यांक लिक हुँदा भेन्टिलेटरमा रहेका २२ बिरामीको मृत्यु
भारत महाराष्ट्रको नासिकस्थित एक अस्पतालमा अक्सिजन ट्यांक लिक हुँदा २२ बिरामीको मृत्यु भएको छ। नासिकको जाकिर हुसेन अस्पतालमा अक्सिजन ट्यांक लिक हुँदा भेन्टिलेटरमा रहेका २२ बिरामीको मृत्यु भएको हो। स्थानीय प्रशासनका अनुसार लिकेजका कारण अस्पतालमा आधा घण्टा अक्सिजन आपूर्ति...
रिंगटा रोग होइन् यो त रोगको लक्षण हो । रिंगटा किन लाग्छ भनेर हाम्रो शरीर सन्तुलन कसरी हुन्छ भनेर बुझ्न जरुरी छ । हाम्रो शरीर सन्तुलनमा बस्नका लागि आँखा, दिमाग, भित्री कान माशंपेशी तथा जोर्नीहरुकोको सन्तुलन मिल्नुपर्छ । कान,...
वायु प्रदुषणका कारण उकुसमुकुस बनेको वातावरण। खानेपानी, विद्युत, सञ्चारलगायत पूर्वाधार निर्माणका नाममा खोतलिएका सडकबाट उड्ने धुलोको उस्तै समस्या। घर बाहिर निस्किँदा विषाक्त प्रदुषणका कारण आँखा पोल्ने, जिउ चिलाउनेजस्ता समस्या धेरै काठमाडौवासीका साझा समस्या बनिरहेको बेला कोरोनाको दोस्रो लहर तीव्र...
बालापन निकै म्यारो र अबोध हुन्छ। बालापन सबैलाई जीवनभर प्रिय लाग्नेगर्छ। राम्रो बानिको विकास गर्ने, इम्युनिटी पावर बढाउने र धेरै कुरा सिक्ने उमेर पनि यही हो। सानोमा राम्रो बानि र धेरै कुराहरू सिकाइयो भने यो जीवनभर काम लाग्छ। बच्चाको...
आँखा हाम्रो शरीरको महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील अंग हो। आँखाकै कारण हामीले संसार देखिरहेका हुन्छौं। अहिले मौसम फेरिँदो छ। चिसोबाट बिस्तारै गर्मीतर्फ मौसम उन्मुख भइरहेको छ। चैत/बैशाख हावाहुरी चल्ने महिना हुन्। यस्तो बेला हावासँगै मसिना धुलोका कण उडिरहेका हुन्छन्। हामीले...
बालबालिकाको दाँतलाई किरा लाग्नबाट कसरी जोगाउने ?
दाँतले खानेकुरा मात्रै चपाउने काम गर्दैन। यसले मानिसको सुन्दरता दिने काम पनि गर्छ। अहिलेका बालबालिकामा चकलेट भनेपछि खुरूकै हुन्छन्। आफ्नै आमाबुबाले माया गरेर नानीबाबुलाई चलकेट दिइरहेका हुन्छन्। तर, निरन्तर चलकेट तथा गुलियो पदार्थको सेवनले बालबालिकाको दाँत बिग्रिन्छ। जसका कारण...
बच्चालाई बान्ता हुनु सामान्य कुरा हो। भाइरसको संक्रमण, मोसन सिकनेस वा फुड प्वाइजनका कारण बच्चालाई बान्ता हुन सक्छ। तर, पटक-पटक बान्ता भइरह्यो भने ध्यान दिनुपर्छ। बच्चाले बान्ता गर्नेबित्तिकै मानिसले मेडिकल वा अस्पताल पुगेर औषधी ख्वाउने गर्छन्। त्योभन्दा घरेलु उपचार...